योगको उचित विधी र स्वास्थ्य-लाभ – Kantipur Press
नियमित र सही ढंगले गरिने योग अभ्यासले शरीरलाई लचिलो, फुर्तिलो, बलियो, तन्दुरुस्त र स्वस्थ राख्छ । योगले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
यद्यपि योगबाट कसरी स्वास्थ्यमा लाभ मिल्छ ? योग गर्ने खास तौर–तरिका के हुन् ? कस्तो अवस्थामा योग गर्नु उचित हुँदैन ? कस्तो योग आसन एंव विधी बढी सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ ? यसबारे भने सबै जानकार नहुन सक्छन् ।
पछिल्लो २४ घन्टा यता कोरियामा ४१ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिय,जोखिम कायमै !